Maxkamadda Sare ee Somaliland Oo dhex-dhexaadin Ku Dhamaysay Dacwad La Xidhiidhay Markab Berbera Ku Xayirnaa. – somalilandtoday.com
Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa go’aan ka soo saartay cabasho ay u soo gudbiyeen wakiilka shirkadaha Oomaar, Saba-wanaag, Cali Burco, Samaale, Horseed, Barako, Qoormadoobe iyo Nuux oo uu wakiil u yahay Maxamed Cismaan Cabdi iyo Markabka MV Jabal Cali 3 oo ay leedahay shirkada Kenz oo uu wakiil u yahay Liibaan Axmed Maxamed Cashuur.
Markabka Jabal Cali 3 ayaa xayirnaa tan iyo 02/11/2021, kadib markii Maxkamadda Gobolka Saaxil ay xayiraad saartay, taasi oo salka ku haysay dacwad ay u soo gudbiyeen shirkadaha sare ku xusan oo uu ka maqnaa Markabka Jabal Cali 5 oo u siday hanti gaadhaysa ilaa 7 milyaan oo doolar. Dhinacyada ay dacwaddu ka dhaxaysay ee isku maan-dhaafsanaa arrinta Markabka Jabal Cali 3 xayiraadiisa ayaa Maxkamadda Sare u soo gudbiyay cabasho ku qotonta arrintooda, taasi oo ay Maxkamadda Sare ku soo af-jartay dhex-dhexaadin (mediation and arbitration) ay labada dhinacba heshiis ku yihiin, si loo soo furdaamiyo hantida ka maqan shirkadaha waddaniga ah, isla markaana uu Markabka Jabal Cali u sii wato shaqadiisa.
Maxkamadda Sare waxay go’aamisay in Maxkmadda Gobolka Saaxil ay xayiraada ka qaado Markabka Jabal Ali 3, marka ay fuliyaan dhinacyadu heshiiska ka soo baxay, wada-hadalka (negotiation) iyo dhex-dhexaadinta (mediation & arbitration) ay Maxkamadda Sare ku soo gunaanaday murankii u dhexeeyay labada dhinac, sidoo kale dhex-dhexaadinta lagu so af-jaray muranka waxa ka qayb qaatay badhasaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi iyo maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi.
Arrintan wada-hadalka iyo dhex-dhexaadinta ee lagu furdaamiyay Markabka ayay Maxkamadda Sare ku xalisay dacwaddo muddo dheer taagnaa oo wakhti qaatay isla markaana xal iyo maarre loo waayay.